गोंगबु ह’त्या प्रकरणमा प्रहरीलाई पहिलो सफलता, चितवनबाट पक्राउ परिन यी युवती — Sanchar Kendra
१आप्रवासी कामदारको अनुमति (भिसा) रद्द गर्दै कुवेत, कति नेपाली पर्छन मर्कामा ?
२प्रधानमन्त्री कप क्रिकेट : आर्मीले बागमतीलाई दियो २३० रनको विजयी लक्ष्य
३बी डिभिजन लिगका खेलाडी क्लबको सम्पर्क बाहिर
४टस हारेको आर्मी ब्याटिङ गर्दै
५युभेन्टस कोपा इटालियाको सेमिफाइनलमा
६बार्सिलोना कोपा डेल रे फुटबलको क्वाटरफाइनलमा, मेस्सीको उत्कृष्ट प्रदर्शन
७प्रधानमन्त्री ओली र ४ पूर्वप्रधानन्यायाधीश विरूद्धको अपहेलना मुद्दामाथि सुनुवाइ सुरू
८जब संवैधानिक इजलासमा गुञ्जियो- न बिर्सेँ तिमीलाई, न पाएँ तिमीलाई…
९ग्लोबल आइएमई बैंक र भण्डारा दूग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर
१०ज्योति विकास बैंकको १३औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, ४६ अर्ब निक्षेप संकलन
११स्टाण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको नाफा पनि खुम्चियो
१२कमजोर अबस्थामा एनआइशी एशिया बैंकको मूनाफा
गोंगबु ह’त्या प्रकरणमा प्रहरीलाई पहिलो सफलता, चितवनबाट पक्राउ परिन यी युवती
काठमाडौं । गोंगबुमा एक पुरुषको वि’भ’त्स ह’त्या भएको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा एकजना पक्राउ परेका छन् । चितवनको टाढी, माधवपुरबाट कल्पना शाही नामकी युवती पक्राउ परेकी हुन् ।
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार अपराध भएको कोठामा बस्ने महिला पक्राउ परेकी हुन् । उनलाई अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, चितवनमा राखिएको छ । प्रहरीले उनलाई काठमाडौं ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
आइतबार गोंगबु चोकनजिकै सुटकेशभित्र टाउको र खुट्टाविनाको श’व भेटिएको थियो । कुकुरको सहयोगमा प्रहरीले त्यसको तीन सय मिटर पर टाउको र खुट्टा भेटेको थियो । मृतक दाङका कृष्णबहादुर बोहोरा भएको खुलेको छ ।
सुटकेश र झोलामा फेला परेको स्थानबाट ५० मिटर पर रहेको घरमा बोहोराको ह’त्या भएको खुलेको थियो । घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी श्यामलाल ज्ञवालीले बताए ।
यसैबीच नेपालमा सोमबार थप ४ जनाको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । योसँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या ७९ पुगेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले आइतबार थप ४ जनाको कोरोनाले मृत्यु भएको पुष्टि गरेका हुन् ।
डा. गौतमका अनुसार बाँकेको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल कोहलपुरमा निमोनिया भएर भर्ना भएकी ७० वर्षीया महिलाको आइतबार दिउँसो ३ बजेर १० मिनेट जाँदा मृत्यु भएको हो । उनको पनि कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यसैगरी पर्सा यसैगरी पर्साको वीरगञ्जमा-१५ की ४५ वर्षीया महिलाको पनि कोरोनाले मृत्यु भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि यही साउन २४ गते उनलाई नारायणी कोभिड विशेष अस्पताल भर्ना भएकी थिइन् । उपचारको क्रममा २५ गते मृत्यु भएकी उनको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो ।
काठमाडौ-१० मध्यबानेश्व बस्ने एक ७६ वर्षीय पुरुषको साउन २६ गते मेडिकेयर अस्पतालमा मृत्यु भएको छ । यसैगरी कीर्तिपुर ट्याङ्लाफाँट बस्ने ६४ वर्षीय पुरुषको पनि आज बिहान निधन भएको छ । योसँगै कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या ७९ पुगेको छ ।
डा. गौतमका अनुसार अनुसार यसअघि आइतबार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत कोभिड-१९ उपचार केन्द्रमा भर्ना भएका पोखरा-१९ का ६२ वर्षीय एक पुरुषको मृत्यु भएको थियो । त्यसैगरी वीरगञ्जको छपकैया निवासी २० वर्षया एक महिलाको पनि कोरोनाले मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।
त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिका १० शंखमूलका ६० वर्षका पुरुष, काठमाडौंकै गोकर्णेश्वर नगरपालिका ४ का ५४ वर्षका पुरुष, सिन्धुपाल्चोक पाँचपोखरी-६ का ४५ वर्षीय पुरुष र रौटहट परूवा नगरपालिका-७ निवासी ३६ वर्षीय पुरूषको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको पुष्टि भएको थियो । त्यस्तै सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सप्तरीका ७३ वर्षीय एक पुरुषको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु छ भने धनुषाका ६० वर्षीय पुरुषको कोरोनाले मृत्यु भएको थियो।
त्यस्तै बाराको फेटा गाउँपालिका- ३ का एक ६० वर्षीय पुरुषको त्रिवि क्षियण अस्पताल महाराजगंञ्जमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा आज थप ४ जनाको कोरोनाले मृत्यु भएको पुष्टिसँगै हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या ७९ पुगेको छ ।